FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA KANGAL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Kangal
Pascal ilay Alika Kangal Tiorka amin'ny faha-2 taona monina any Tiorkia.
Alika Kangal Tiorka
Ny Kangal Dog dia alika lehibe, matanjaka sy mavesatra volo, ny habeny sy ny refiny dia nanjary voajanahary vokatry ny fampiasany hatrany any Torkia ho mpiambina ny biby mpiremby. Ny loha dia lehibe ary somary malalaka ny sofiny mitete. Ny alika Kangal voafantina araka ny tokony ho izy dia somary lava kokoa (refesina manomboka amin'ny prosternum ka hatrany amin'ny vodiny) noho ny haavony (refesina avy amin'ny malazo ka hatramin'ny tany), ary ny halavan'ny tongotra eo anoloana (refesina hatramin'ny zoro hatramin'ny tany) dia tokony hitovy kely noho ny antsasaky ny haavon'ny alika. Ny rambony, izay miforitra matetika, dia mameno ilay silhouette miavaka. Ny Kangal Dog dia manana palitao roa sosona izay fohy sy somary matevina. Ny Kangal Dog dia manana sarontava mainty sy sofina volvety mainty izay mifanohitra amin'ny loko amin'ny vatana iray manontolo izay mety manomboka amin'ny mazava dun ka hatramin'ny volondavenona. Ny ratra mendrika na ny porofo hafa momba ny ratra vokatry ny fiasana tany an-tsaha dia tsy azo saziana.
Ny alika Kangal mahazatra dia voalohany indrindra a alika mpiambina tahiry ary manana toetra mampiavaka ny alika toy izany - mailo, faritany ary miaro ny biby fiompy na ny fianakavian'olombelona nifamatorany. Ny Alika Kangal dia manana ny tanjaka, ny hafainganam-pandeha ary ny fahasaharana misakana sy miatrika fandrahonana amin'ny andian'ny ondry aman'osy sy osy izay arofan'izy ireo ao Torkia sy ny tontolo vaovao. Kangal Dogs dia aleony mampitahotra ny mpiremby fa hijoro ara-batana ary hanafika mihitsy aza raha ilaina. Kangal Dogs dia manana fahamailoana voajanahary amin'ny alika hafahafa fa tsy dia tia ady amin'ny olona matetika. Somary natokana ho an'ny olon-tsy fantatra izy ireo, saingy mahatoky sy be fitiavana amin'ny fianakaviana. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Haavony: Lehilahy 30 - 32 santimetatra (77 - 86 cm) Vehivavy 28 - 30 santimetatra (72 - 77 cm)
Milanja: Lehilahy 110 - 145 pounds (50 - 66 kg) Vehivavy 90 - 120 pounds (41 - 54 kg)
Ny Alika Kangal dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy io ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny. Fiarovana voajanahary ny alika Kangal, saingy 'olona oriente' kokoa noho ny ankamaroan'ny karazana mpiambina biby fiompy hafa. Ny alika Kangal izay mifanerasera tsara amin'ny ankapobeny dia tsy dia mahery setra amin'ny olona, ​​ary indrindra tia ny ankizy - saingy tsy manaiky ny fetran'ny fananana ny karazany. Handehandeha izy io, hanafika alika very, ary mety ho mahery setra amin'ny zanak'olombelona mpiditra an-tsokosoko , indrindra amin'ny alina. Ilaina ny fanaovana fefy tsara.
Ity karazana ity dia mila fanatanjahan-tena sy fanentanana ara-tsaina. Alika miasa miaraka amina velarantany dia hiasa amin'ny alàlan'ny fisafoana ny trano sy ny fiarovana ny biby fiompiny. Mila alika ny fianakaviana mandeha isan'andro , fihazakazahana na hazakazaka ary fifaneraserana ivelan'ny trano, satria raha tsy misy asa hatao dia tsy hanana fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana mety izy ireo ary mety ho lasa sarotra tantanana. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
sary terrain mifono wheaten malefaka
Alika kely 5 - 10
Ity karazana ity dia mitaky fikarakarana kely. Ny palitao dia mila miborosy tanteraka mandritra ny vanim-potoana fandorana indroa isan-taona. Afaka miala amin'ny tsy fijerena kely ianao amin'ny sisa amin'ny taona. Ny Kangal Dog dia mpantsaka mavesatra mandalo.
Nilaza ny vahoaka Tiorka: ny Kangal Dog dia karazana mpiambina andian'ondry taloha, heverina fa mifandraika amin'ireo alika amam-borona am-boalohany aseho amin'ny zavakanto asyrianina. Ny karazany dia nomena anarana ho an'ny Distrikan'i Kangal, faritanin'i Sivas, afovoan'i Torkia izay niavian'izany. Na dia efa nifangaro tamin'ny fianakavian'i Aga of Kangal aza ireo karazany ireo, tompon-tany sy mpiadidy lehibe, ny ankamaroany dia atolotry ny mponina izay mirehareha amin'ny fahafahan'ny alika miambina ny ondriny amin'ny osy sy ny osy amin'ireo biby mpiremby nentin-drazana toy ny amboadia, bera ary amboadia. Ny fitokana-monina somary somary mitokana ny faritra Sivas-Kangal dia nitazona ny alika Kangal ho afaka amin'ny fiompiana ary niteraka karazan-java-maniry voajanahary amin'ny fitoviana, endrika ary fitondran-tena. Na eo aza ny fiaviany isam-paritra, maro ireo Tiorka no mihevitra ny alika Kangal ho alika nasionaliny. Ny governemanta Tiorka sy ny andrim-pianarana dia miasa kennels fiompiana izay ameloman'i Kangal Dogs ary voatazona tsara ny zana-kazo. Ny Kangal Dog dia nasongadina tamin'ny hajia paositra sy vola madinika Tiorka. Ny Kangal Dog dia notaterina tamin'ny literatiora canine eropeana sy avaratra amerikana voalohany avy amin'i David sy Judith Nelson, Amerikanina izay nandalina ireo alika fony izy nonina tany Torkia. Ny Nelsons dia nanafatra ny alika Kangal voalohany tany Etazonia tamin'ny 1985. Ity alika ity, ary ny fanafarana avy eo dia nanome ny fototra ho an'ny Kangal Dog any Etazonia. Ny tena alika Kangal dia avy amin'ny faritanin'i Sivas sy ny tanànan'i Kangal.
Ny sasany kosa milaza: ny karazany dia novokarin'i Charmian Steele voalohany ary ny hafa tany Angletera. Ny Kangals voalohany dia niditra tany Angletera tamin'ny 1965. Ny fako voalohany dia teraka tamin'ny 1967. Anatolian (Karrabash) Shepherd Dog no nantsoina ny karazany. Taty aoriana, nisy olona nitondra alika pinto avy any Anatolia ary nitondra fifandirana sy fizarazarana tao amin'ny klioba, ary ny fisarahana teo amin'ireo mpiompy Kangal (Karrabash) sy ireo mpiompy Alika mpiandry ondry Anatolianina.
Ny olona sasany dia manambara fa ny alika mpiandry ondry Tiorka rehetra dia karazany iray, ny Mpiandry ondry Anatolianina , na izany aza, ny tena Alika Kangal Tiorka dia voalaza fa karazany misaraka amin'ny alika mpiandry ondry tiorka. Ny fanondranana ireo alika Kangal madio avy any Torkia dia voafehy ary efa voarara tanteraka izao. Ny toe-piainana ara-tantara mitoka-monina ao amin'ny faritra Sivas-Kangal dia nahatonga ny fampandrosoana ny Alika Kangal ho karazany miavaka, izay nambara ho National National of Turkey ary harem-pirenena. Ny tena Alika Kangal Tiorka no mpiandry ondry miasa voalohany indrindra. Ny Kangal Dog Club of America dia manohy miasa mba hanamorana ny famerana ny fanafarana. Ny alika nafarana dia heverina ho sarobidy indrindra amin'ny mety ho fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny dobo ara-pirazanana any Etazonia.
sary terrain wheater tery mifono malefaka
KDCA = Kangal Dog Club any Amerika
Kangal Dog amin'ny hajia paositra Tiorka
Ity dia hajia Tiorka mampiseho ny karazan'akan'i choban kopegi (alika mpiandry) tiana indrindra, ny Kangal Dog.
Vola Kangal navoakan'ny governemanta Tiorka.
Hijery ohatra hafa momba ny Kangal Dog
Sarin'ny alika Kangal 1
Lisitry ny alika mpiambina andiany
alika kely mpiandry ondry amidy
mpiandry mpiandry hena
amerikana bulldog frantsay bulldog mix
alika malamute sy mpiandry ondry alemana